ဘယ်လိုလုပ်၇မှန်းမသိလို့ပါ — MYSTERY ZILLION
January 2011 edited February 2011 in About Forum
ipad apple 3g တစ်လုံး ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ipad က ပါကင်ပိတ်လာတာဆိုတော့ ဘာမှမလုပ်တတ်ပါ။ ပါ၀ါဖွင့်ကြည့်တော့ လဲ itune နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ပဲပြောနေပါတယ်။ တတ်သလောက်လုပ်ကြည့်တော့လဲ itune နဲ့ ipad ဆက်သွယ်လို့မရနိုင် လို့ပဲ ပြောနေပါတယ်။ အဲဒါ မျောက်အုန်းသီးရသလိုဖြစ်နေလို့ ipad သုံးလို့ရအောင် ညွန်ပြပေးစေလိုပါသည်။
ashinkawwida wrote: »
တပည့်တော် .. ပြန်လှူလိုက်ပါဖျာ့ ..
ashinkawwida ရဲ့ အနီးအနားမှာ ရှိတဲ့ .. တတ်ကျွမ်းတဲ့ တစ်ယောက်ကို ခေါ်ပြီး သေချာ အနီးကပ် မေးကြည့်ပါလားခင်ဗျာ။ ပိုအဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်။
ကျနော်လဲဲးလက်ထဲးကို ipad 64gb တစ်လုံး​ေ​ရာက်လာ​ပါ​တ​ယ​် ပါ​ကင်ပိတ်ထား​တဲ​့​ဟာ​ပါ ထ​ည​်​့​လို​့​ရ​တာ​အကုန်ထ​ည​်​့ေ​ပး​ပါ​တဲ​့ ကျေ​နာ​် အခု​မှာ​ေ​တွ​့​ဘူး​ေ​တာ​့ ဘယ်ကေ​န​ဘယ်လို​စ​လုပ်ရ​မ​လဲး​မ​သိ​ြ​ဖ​စ​်ေ​န​ပါ​တ​ယ​် အဲ​့​ဒါ​နဲ​့ သူ​စာ​ရွက်ကေ​လး​ေ​နာက်ကို​ြ​က​ည​်​့​လို​က​်ေ​တာ​့ itune ကို ေ​ဒါ​င​်း​လုပ်လိုပ်လိုက်ပါ​ဆို​တာ​နဲ​့ itune software ေ​ဒါ​င​်း​လုပ်လုပ်လိုက်ပါ​တ​ယ​် ြ​ပီး​ေ​တာ​့​စက်မှာ installation လုပ်လို​က​်​ြ​ပီး ipad ကို​ဖွ​င​်​့​ြ​ပီး ကွန်ပျူ​တာ​နဲ​့ချိတ်ပါ​တ​ယ​် ချိတ်လို​က​်ေ​တာ​့ register လုပ်ခိုင်ပါ​တ​ယ​် အဲ​့​ဒါ​နဲ​့ ကျေ​နာ​်​လဲ next နဲ​့​သွား​လိုက်တာ
apple id ဆို​ြ​ပီး​ေ​တာ​့ ေ​တာ​င​်းေ​န​ပါ​တ​ယ​် use my apple id to register my ipad ဆို​ြ​ပီး apple id & password ေ​တာ​င​်းေ​န​ပါ​တ​ယ​် ဘာ​လုပ်လို​့​လုပ်ရ​မ​လဲး​ကို​မ​သိ​ေ​တာ​့​ဘူး ေြ​ပာ​ေ​ပး​ြ​က​ပါ​အု​န​်းေ​နာ​်...
yes that was the problem that when I bought iPAD. First you need to get itune installed and have to be apple store account in hand. If you doesn't know how to, give me email i will create apple id for you, I mean sayar daw ashin U kawwida and to nay lin. I am thinking to createapdf file to users how to do etc. and post it here. Please waitabit, may be in this week I will post it here.
Ipad မသုံးတတ်သေးသူများအတွက်အထက်ပါ video ကို download လုပ်ပီးကြည့်ပါ ။ သာမန်အားဖြင့် ipd ကို out off box တွင် itune9or 10 ရှိသော computer နှင့်ချိတ်ရပါမည်။ ချိတ်ရုံနှင့်လဲမပီးပါ application များ install လုပ်ရန် (jail break) မလုပ်ထားလျှင် online apple store account ရှိရန်လိုပါသည်။မြန်မာမှဖြစ်လျှင် connection မကောင်းသဖြင့် online application install လုပ်ရန်မှာအဆင်မပြေပါ jail break လုပ်ရန်လိုပါသည်။ jail break လုပ်လိုပါက technoland တွင်လုပ်ပေးပါသည်။ ၃၀၀၀၀ခန့်ဟုသိရပါသည်။ ကျန်တာကတော့ ရိုးရိုး computer သုံးသလိုပါဘဲ။ မထူးလှပါ။ အဆင်​ပြေကြမည်ထင်ပါသည်။ မအိအိရန်ကုန်တွင်ရှိပါကအလကားလုပ်ပေးပါမည်။
မ​အိ⁠အိ ကျေး​ဇူး​တင်ပါ​တ​ယ​် အခု​လို​့ေ​ြ​ပာ​ေ​ပး​တာ​ကို ကျေ​နာ​်​အခု ေ​တာ​့ သုံး​လို​့​ရ​သွား​ပါ​ြ​ပီ ကျေ​နာ​် သူ website မှာ account သွား​လု​ပ​်​ြ​ပီး​လုပ်လိုက်တာ​သုံး​လို​့​ရ​သွား​ပါ​ြ​ပီ... အခုတော့ JB လုပ်ရန် ကြိုးစားနေပါသည်...